FILOHA ANDRY RAJOELINA : “Ny herim-po nananan’ireo tia tanindrazana no hananganako ny firenena”
Tsy hamela velively ny ra nalatsak’ireo tia tanindrazana ho very fotsiny ihany ny Filoha, Andry Rajoelina. 7 février 2019
Zava-dehibe ny famoizan’izy ireo aina mba hitondra fanovana eto amin’ny firenena, “ny herim-po izay nananan’izy ireo no hananganako ny firenena”, hoy ny filoha Andry Rajoelina.
Nanome voninahitra ny lanonam-pahatsiarovana ny faha-10 taona nisian’ny tolom-bahoaka ho an’ny fahafahana ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina. Nametraka ny maha zava-dehibe ny fisian’ireo olona maty ho an’ny tanindrazana ny tenany, izay nilazany fa iny herim-po nananan’izy ireo iny no anisany mampihetsika ny hambom-pony hanavotra ny firenena.
“Tsy avelako ho raraka an-tany ny ain’ny rahalahintsika, anabavy, ny zoky sy ny zandry ary ny herim-po, herin-tsaina sy ny fitiavan-tanindrazana nananan’izy ireo no hoentiko hanangana sy hanavotra an’ity firenena malalantsika ity”, hoy ny lahatenin’ny Filoha. Nambarany fa tsy fahatsiarovana ny tolona fotsiny ihany no natao tamin’io fa ho fanamafisana ny tolona izay efa natao. Tolona ho an’ny fanavotana ny firenena, tolona hampandroso ny firenena mba tsy hampitsanga-menatra an’i Madagasikara eo anatrehan’ireo firenena hafa. Naverin’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina hatrany ny finiavany sy ny faniriany lalina hitondra fiovana eto amin’ny firenena mandritra ny fe-potoam-piasana izay nampindramin’ny vahoaka Malagasy azy ao anatin’ny dimy taona.
“Ny tenako manokana dia efa nolazaiko ombieny ombieny fa hanao ny ezaka rehetra, izay tratry ny heriko rehetra ary afaka dimy taona dia mahasahy milaza amintsika aho fa ny asa ataontsika miaraka, ny fitiavan-tanindrazana izay ao am-pontsika dia hiasa haingana isika ary hiasa mafy ka ho reharehan’ny Malagasy tsy vaky volo i Madagasikara”, hoy hatrany ny Filoha. Nohamafisiny fa tsy azo ekena intsony ny fandatsahan’aina ny mpiray tanindrazana na inona na inona tsy fitovian-kevitra ara-politika.
Ankoatr’izay, anisany nampahatsiahivin’ny Filoha, omaly fa tao anatin’izay folo taona izay dia betsaka ireo zavatra nolalovana. Nampijoro hatrany ny fitiavan-tanindrazana mba ho tombotsoa ambonin’ny firenena ny tenany. Anton’io ny tsy nilatsahany hofidiana tamin’ny taona 2013. Nisy ireo efa niala taminy, nisy ireo namadika ny tolona ary nisy kosa anefa ireo niaraka sy nanohana azy hatramin’ny farany. Miantso ny rehetra hampiombona ny hery ny Filoha mba hampandrosoana ny firenena.